Dainik Headlines - Page 190 of 190 - Nepali Khabar from Nepal
दीपावलीको तयारी गर्न भन्दै रातो माटो लिन गएका ४ बालिका ढिस्कोले पुरिएर गम्भीर घाईते
धनुषा । दीपावलीको तयारी गर्न भन्दै रातो माटो लिन गएका महोत्तरीका चारजना बालिका माटोको ढिस्कोमा पुरिएर गम्भीर घाइते भएका छन्। बिहानै माटो लिन गएका उनीहरुलाई माथिबाट खसेको माटोको ढिस्कोले पुरेको स्थानीयले बताएका छन्। घाईतेमध्य एकजना बालिकाको अवस्था गम्भीर छ । महोत्तरीको औरही नगरपालिका वडा नम्बर ३ श्रीपुरका विनोद साहकी १० …
घटस्थापनादेखि भक्तपुरमा लाग्ने नौराते मेला शुरु
October 11, 2018	Dharma 0
भक्तपुर, २५ असोज । हरेक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात घटस्थापनादेखि भक्तपुरमा लाग्ने नौराते मेला शुरु भएको छ । घटस्थापनाको रातिबाट यहाँका नौ वटा बेग्लाबेग्लै शक्तिपीठमा नौ रातसम्म मेला लाग्ने गर्दछ । राति मन्दिरमा पूजा तथा दर्शन गर्नेको भीड लाग्ने गर्दछ । नवरात्री मेलाको पहिलो रात भक्तपुर नगरपालिका च्यामासिंहस्थित ब्रह्मायणी …
काठमाडौं, २५ असोज । आज बिहीबार विदेशी मुद्राको मूल्य केही घटेको छ। आज युएस डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ४३ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ११९ रुपैयाँ ३ पैसा रहेको छ। यसअघि डलरको ११८ रुपैयाँ ७३ पैसा रहेको थियो। त्यसैगरी साउदी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ५७ पैसा र बिक्रिदर …
बिहिबारको दिन भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी ५ काम, नत्र पछुताउनु पर्ला !
बिहिबार यी कार्य नगर्नुहोस, नत्र पछुताउनु पर्ला ! बिहिबारलाई धार्मिक दिन मानिन्छ । ब्रम्हाण्डमा अवस्थित ९ ग्रहको गुरु मानिने वृहस्पतिको दिन मानिने बिहीबार धार्मिक दृष्टीले महत्वपूर्ण मानिन्छ । बिहिबार गरेका धार्मिक कार्यको फल तत्काल मिल्ने मानिन्छ । तर बिहिबार केही काम गर्न भने निषेध गरिएको छ । यी हुन् बिहिबार …
किन आउँछ सेतो दुबी ? सेतो दुबी आएकाहरुले ध्यान दिनु पर्ने कुरा
October 11, 2018	Healthy Life 0
हाम्रो समाजमा अनुहारमा सेतो दुबी देखिनुलाई कर्मको खेल भन्ने र उपचार नगर्ने प्रचलन व्याप्त छ । सेता दुवी आउनुलाई सामान्य रुपमा लिएर उपचार गर्न चासो नदेखाउनेहरु छन् । तर सेतो दुबी छालामा देखापर्ने समस्या मध्ये शरीरलाई सबैभन्दा बढी कुरुप बनाउने समस्या हो । यो दुध जस्तै सेतो हुने भएकाले सेतो …
नेपालका १० रिसोर्ट जुन पाँच तारे भन्दा महँगा छन्, एक रातको कति ?
काठमाडौं: होटल भन्ने वित्तिकै सुविधा सम्पन्न पाँच तारे होटल झट्ट सोच्ने गरेका गर्छौ । तर विगत देखिको इतिहास हेर्ने हो भने पाँच तारे होटलभन्दा बढी लगानी गरेर खोलिएका सुविधा सम्पन्न रिसोर्टहरू महँगा र सुविधायुक्त छन् । नेपालमा पछिल्लो समय तारे होटल भन्दा पनि पर्यटक स्तरका रिसोर्टहरु खुल्नेक्रम झनै बढ्दै गएको …
कुबेतबाट एक नेपाली चेली रुदै मिडियामा, गर्भवती बनाएर केटा फरार, केटा खोजिदिन आग्रह (भिडियो)
काठमाडौँ : आजभोली सबैको पैसा फलाउने सपनाको संसार भएको छ विदेश । नेपालबाट दैनिक हजारौ युवायुवती पैसा कमाउने सपना बोकेर विदेश जान्छन । कतिले पैसा कमाएर घर फर्किन्छन कतिको कफन भित्र लाश फर्किन्छ । कति भने अझै पनि बेवारिशे बनि बिदेशमा नै अलपत्र परेका छन् । यस्तै एक जना युवती …
अदुवा स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसमा यस्ता न्यूट्रीएन्ट्स हुन्छ, जसले कयौँ स्वास्थ्य समस्याबाट बचाउन मद्दत गर्छ । यसको फाइदालाई हेर्ने हो भने चिकित्सकका अनुसार, दिनहुँ अदुवाको एक टुक्रा आफ्नो आहारमा समावेश गर्नुपर्दछ । यसकारण आज हामी चर्चा गर्दैछौँ, अदुवाको यस्ता ७ फाइदा र यसको साथै यस्ता ३ किसिमका …